Joshụa 22 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ebo ndị ketara ebe ọwụwa anyanwụ lawara (1-8)
A rụrụ ebe ịchụàjà n’akụkụ Osimiri Jọdan (9-12)
E kwuru ihe mere e ji rụọ ebe ịchụàjà (13-29)
E mere udo (30-34)
22 Joshụa wee kpọkọta ebo Ruben, ebo Gad, na ọkara ebo Manase 2 sị ha: “Unu emeela ihe niile Mosis ohu Jehova gwara unu mee.+ Unu emeekwala ihe niile m gwara unu mee.+ 3 Unu ahapụghị ụmụnne unu n’oge a niile ruo taa.+ Unu emeekwala ihe Jehova bụ́ Chineke unu gwara unu mee.+ 4 Jehova bụ́ Chineke unu emeela ka ụmụnne unu zuru ike, otú o kwere ha ná nkwa.+ Unu nweziri ike ịlaghachi n’ụlọikwuu unu n’ala Mosis ohu Jehova nyere unu n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan.+ 5 Naanị ihe unu ga-eme bụ ilezi anya na-edebe Iwu Mosis ohu Jehova nyere unu.+ Otú unu ga-esi na-edebe ya bụ ịhụ Jehova bụ́ Chineke unu n’anya,+ na-eje ije n’ụzọ ya niile,+ na-edebe iwu ya,+ ghara ịhapụ Chineke unu,+ na-ejikwa obi unu niile na mkpụrụ obi*+ unu niile na-efe ya.”+ 6 Joshụa wee gọzie ha ma gwa ha ka ha laghachi n’ụlọikwuu ha, ha alawa. 7 Mosis nyere ọkara ebo Manase ala na Beshan,+ Joshụa enyekwa ọkara nke ọzọ, bụ́ ụmụnne ha, ala n’ebe ọdịda anyanwụ Osimiri Jọdan.+ Joshụa gọzikwara ha mgbe ọ gwara ha ka ha laghachi n’ụlọikwuu ha. 8 Ọ gwakwara ha, sị: “Jirinụ ọtụtụ akụ̀, ọtụtụ anụmanụ, ọlaọcha na ọlaedo, ọla kọpa na ígwè, nakwa ọtụtụ uwe laghachi n’ụlọikwuu unu.+ Werenụ ihe ndị unu kwatara+ n’aka ndị iro unu gaa ka unu na ụmụnne unu kee ha.” 9 Mgbe ihe a mechara, ebo Ruben, ebo Gad, na ọkara ebo Manase hapụrụ ndị Izrel ndị ọzọ na Shaịlo, nke dị n’ala Kenan, lawa Gilied,+ bụ́ ala ha ketara. Ebe a ka ha bi n’ihi na ọ bụ ebe Jehova gwara Mosis ka ha biri.+ 10 Mgbe ebo Ruben, ebo Gad, na ọkara ebo Manase rutere n’akụkụ Osimiri Jọdan nke dị n’ala Kenan, ha rụrụ ebe ịchụàjà ebe ahụ. Ebe ịchụàjà ahụ buru ezigbote ibu. 11 E mechaa, ndị Izrel ndị ọzọ nụrụ ka a sịrị:+ “Ebo Ruben, ebo Gad, na ọkara ebo Manase arụọla ebe ịchụàjà n’ókè ala Kenan dị n’akụkụ Osimiri Jọdan, ná mpaghara nke anyị nwe.” 12 Mgbe ndị Izrel niile nụrụ ya, ha niile gbakọrọ na Shaịlo+ ka ha gaa lụso ha agha. 13 Ndị Izrel wee zie Finihas+ nwa Elieza onye nchụàjà ka ọ gakwuru ebo Ruben, ebo Gad, na ọkara ebo Manase, ndị bi n’ala Gilied. 14 Ndị isi iri so ya gaa. Onyeisi nke ọ bụla nwere ebo ọ nọchiri anya ya n’Izrel. Ha niile bụ ndị isi n’ezinụlọ nna ha n’ime ndị isi ọnụmara dị iche iche* n’Izrel.+ 15 Mgbe ha bịakwutere ndị ebo Ruben, ndị ebo Gad, na ọkara ebo Manase n’ala Gilied, ha gwara ha, sị: 16 “Ndị Jehova niile kwuru, sị: ‘Gịnị mere unu ji nupụrụ Chineke Izrel isi?+ Unu akwụsịla iso Jehova, n’ihi na unu nupụụrụ Jehova isi gaa rụọ ebe ịchụàjà nke unu.+ 17 Mmehie anyị mere na Piọ ó zubeghị? Ùnu echefuola ahụhụ a tara ndị Jehova? Anyị ka na-ata ahụhụ mmehie ahụ anyị mere.+ 18 Ùnu chọrọ ịkwụsị iso Jehova? Ọ bụrụ na unu enupụrụ Jehova isi taa, o ruo echi, ya ewesa ndị Izrel niile iwe.+ 19 Ugbu a, ọ bụrụ na ala unu nwetara rụrụ arụ, gafetanụ n’ala Jehova nwe,+ ebe ụlọikwuu Jehova dị,+ ka anyị na unu biri. Unu enupụrụla Jehova isi. Unu arụkwala ebe ịchụàjà nke unu, nke dị iche n’ebe ịchụàjà Jehova bụ́ Chineke anyị. Unu rụọ ya, anyị enupụrụla Chineke isi.+ 20 Mgbe Ekan+ nwa Zira nupụrụ isi, zuru ihe e kwesịrị ibibi ebibi, ọ̀ bụ na Chineke ewesaghị ndị Izrel niile iwe?+ Ọ bụghịkwa naanị Ekan nwụrụ n’ihi ihe ọjọọ ahụ o mere.’”+ 21 Ndị ebo Ruben, ndị ebo Gad, na ọkara ebo Manase wee sị ndị isi ọnụmara dị iche iche* n’Izrel:+ 22 “Jehova, Chi kacha chi niile, ma ihe mere. Jehova,+ Chi kacha chi niile, ma ihe mere anyị ji mee ihe a. Ndị Izrel ga-amatakwa. Ọ bụrụ na anyị nupụụrụ Jehova isi, mebiekwa iwu ya, ya azọpụtala anyị taa. 23 Ọ bụrụ na anyị rụrụ ebe ịchụàjà nke anyị ka anyị kwụsị iso Jehova, nakwa ka anyị na-achụ àjà a na-esu ọkụ, àjà ọka, na àjà udo n’elu ya, Jehova ga-ata anyị ahụhụ maka ya.+ 24 Ma, naanị ihe mere anyị ji mee ihe a bụ na anyị nọ na-eche, sị, ‘N’ọdịnihu, ụmụ unu ga-asị ụmụ anyị: “Gịnị jikọrọ unu na Jehova bụ́ Chineke Izrel? 25 Jehova ji Osimiri Jọdan kpaara anyị na unu ókè, unu ebo Ruben na ebo Gad. O nweghị ihe jikọrọ unu na Jehova.” Ụmụ unu ga-emekwa ka ụmụ anyị kwụsị ife* Jehova.’ 26 “N’ihi ya, anyị sịrị, ‘Ka anyị rụọ ebe ịchụàjà. Ọ bụghị maka ịchụ àjà a na-esu ọkụ ma ọ bụ àjà ndị ọzọ. 27 Kama ọ bụ ihe àmà anyị na unu+ nakwa ụmụ anyị* ga-anọchi anyị ga-eji mara na anyị ga na-ejere Jehova ozi, na-achụrụ ya àjà a na-esu ọkụ na àjà udo nakwa àjà ndị ọzọ.+ Ọ ga-eme ka ụmụ unu ghara ịgwa ụmụ anyị n’ọdịnihu, sị: “O nweghị ihe jikọrọ unu na Jehova.”’ 28 Anyị chekwara, sị, ‘Ọ bụrụ na ha agwa anyị na ụmụ anyị ihe a n’ọdịnihu, anyị ga-asị: “Leenụ ebe ịchụàjà nna anyị hà rụrụ nke yiri ebe ịchụàjà Jehova. Ọ bụghị maka ịchụ àjà a na-esu ọkụ ma ọ bụ àjà ndị ọzọ, kama ọ bụ ihe àmà ga-egosi na o nwere ihe jikọrọ anyị na unu.”’ 29 Tụfịakwa! Anyị agaghị enupụrụ Jehova isi. Anyị agaghịkwa akwụsị iso Jehova taa,+ gaa rụọ ebe ịchụàjà ọzọ maka ịchụ àjà a na-esu ọkụ, àjà ọka, na àjà ndị ọzọ, ma e wezụga ebe ịchụàjà Jehova bụ́ Chineke nke dị n’ihu ụlọikwuu ya.”+ 30 Ihe ebo Ruben, ebo Gad, na ebo Manase kwuru juru Finihas onye nchụàjà na ndị so ya afọ. Ndị so ya bụ ndị isi ọnụmara dị iche iche* n’Izrel.+ 31 Finihas nwa Elieza onye nchụàjà gwaziri ndị ebo Ruben, ebo Gad, na ebo Manase, sị: “Anyị amatala taa na Jehova nọnyeere anyị, n’ihi na unu enupụrụghị Jehova isi. Ugbu a, Jehova agaghị ata anyị ahụhụ.” 32 Finihas nwa Elieza onye nchụàjà na ndị isi ahụ wee si n’ebe ndị ebo Ruben na ndị ebo Gad nọ, n’ala Gilied, laghachi n’ala Kenan, kọọrọ ndị Izrel ndị ọzọ ihe ha gatara. 33 Ihe ha kwuru jukwara ndị Izrel afọ. Ndị Izrel wee too Chineke. Ha ekwughịkwa ọzọ na ha ga-aga lụso ebo Ruben na ebo Gad agha ka ha bibie ala ha bi. 34 Ebo Ruben na ebo Gad wee gụọ ebe ịchụàjà* ahụ aha. Ha sịrị, “Ọ bụ ihe àmà na-egosi anyị niile na Jehova bụ ezi Chineke.”
^ Na Hibru, “ndị isi ọtụtụ puku.”
^ Na Hibru, “ịtụ egwu.”
^ Na Hibru, “ọgbọ ndị.”
^ Ihe e kwuru ebe a gosiri na ọ ga-abụ na aha a gụrụ ebe ịchụàjà a bụ Ihe Àmà.